News - RPET Fabric (Recycled PET Fabric) makwaara dị ka coke kalama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwa.
RPET Fabric (Recycled PET Fabric) makwaara dị ka coke kalama akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwa. Ọ bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mepụtara site na iji obere yarị PET ejiri. Igwe carbon ya pere mpe meputara echiche ohuru na mpaghara imu ohuru dika nkwenye nnwale, o nwere ike izoputa ihe ruru 80% ma e jiri ya tụnyere eriri polyester a na - achoghi.
E kere usoro mmepụta ihe na usoro isii: Na-emegharị karama ahụ echekwara → nyochaa ma kewaa karama echekwara as belata karama ahụ echekwara → wepụta silk, jụụ ma nakọta silk → megharịa PET yarn, akwa akwa.
Dị ka ụdị nke yarn: filament ákwà, na-agbanwe ákwà, staple akwa
Dị ka ịkpa ákwà ịke: RPET Oxford ákwà ákwà, RPET shells silk akwa (logo), RPET filament fabric (logo), RPET peach skin velvet fabric, RPET faux suede fabric, RPET chiffon akwa, RPET color butyl akwa, RPET LiXin ákwà (abụghị -ọfụ), RPET conductive ákwà (esd), RPET canvas fabric, RPET terylene fabric, RPET fabric, okporo RPET jacquard akwa, RPET knitting fabric (ákwà), RPET ntupu ákwà (sandwich ntupu ákwà, beads and mesh ákwà, nnụnnụ -eye ákwà), RPET flannelette (coral ajị anụ, Farley velvet, pola ajị anụ, abụọ-n'akụkụ velvet, PV velvet, super soft velvet, soft cotton velvet).
Akpa: akpa kọmputa, akpa ice, akpa, akpa, akpa trolley, njem njem, akpa ịchọ mma, akpa pen, akpa igwefoto, akpa ịzụ ahịa, akpa aka, akpa onyinye, akpa akpa, akpa nwa, igbe nchekwa, igbe nchekwa, akpa ọgwụ, Akpa na ihe ndi ozo;
Texlọ ụlọ: akwa akwa akwa anọ, blanket, azụ, ịtụ ohiri isi, ihe eji egwuri egwu, akwa eji achọ mma, mkpuchi sofa, mkpuchi, nche anwụ, akwa mmiri, mkpuchi anwụ, ákwà mgbochi, ihicha akwa, wdg.
Uwe: ala (oyi) uwe, windbreaker, jaket, vest vest, egwuregwu egwuregwu, osimiri ogologo ọkpa, akpa ihi ụra, uwe eji egwu mmiri, ịchafụ, ọrụ eyi, conductive ọrụ wear, ejiji, opera gown, uwe ura, wdg;
Ndị ọzọ: ụlọikwuu, akpa ihi ụra, okpu, akpụkpọ ụkwụ, ime ime ụgbọ ala, wdg.
Otu tọn RPET yarn = karama rọba 67,000 = 4.2 tọn carbon dioxide echekwara = 0.0364 tọn mmanụ echekwara = 6.2 tọn mmiri echekwara.Ma ugbu a, ọ bụ naanị obere akụkụ ka a na-eji, ma ndị ọzọ na-atụfu ya otu ọ masịrị. n’efu nke ihe onwunwe na mmetọ gburugburu ebe obibi. Ya mere, teknụzụ eji emegharị emegharị nwere atụmanya sara mbara.